Imibuzo evame ukubuzwa - Nanchang Weiti Technology Co., Ltd.
Ukuze amasampula, isikhathi phambili cishe izinsuku ezingu-7. Ukuze ukukhiqizwa ngobuningi, isikhathi phambili izinsuku 20-30 ngemuva kokuthola inkokhelo idiphozi. Izikhathi zokuhola ziqala ukusebenza lapho (1) sesitholile idiphozi yakho, futhi (2) sinemvume yakho yokugcina yemikhiqizo yakho. Uma izikhathi zethu zokuhola zingasebenzi nomnqamulajuqu wakho, sicela udlule izidingo zakho ngokuthengisa kwakho. Kuzo zonke izimo, sizozama ukwamukela izidingo zakho. Ezimweni eziningi, siyakwazi ukwenza kanjalo.
Yebo, sihlala sisebenzisa ukufakwa kwekhwalithi ephezulu yokuthekelisa. Siphinde sisebenzise ukupakisha okuyingozi okukhethekile kwezimpahla eziyingozi nabaqinisekisi bokugcina abandayo abagunyaziwe bezinto ezizwela ukushisa. Ukupakisha kwangochwepheshe nezidingo zokupakisha ezingejwayelekile kungahle kubangele inkokhelo eyengeziwe.
Izindleko zokuthumela zincike endleleni okhetha ngayo ukuthola izimpahla. I-Express imvamisa iyindlela esheshayo kepha futhi iyindlela ebiza kakhulu. Ngolwandle yisisombululo esihle kakhulu semali enkulu. Amanani ezimpahla ngqo singakunika wona uma sazi imininingwane yenani, isisindo nendlela. Sicela uxhumane nathi ukuthola eminye imininingwane.
Ngabe uyayinikeza insizakalo yelebula yangasese yangokwezifiso?
Yebo, singenza ngokwezifiso i-logo yakho yangasese kumikhiqizo nakumaphakethe. Udinga nje ukusithumelela imidwebo yakho ye-logo, imidwebo yobuciko be-Adobe Illustrator yangempela kanye nemidwebo ye-PDF izokwenza kangcono ukuphrinta.
Abadayisi bezinkophe, Ukuqhuma Kwamehlo, Izandiso ze-Eyelash, i-eye liner, imivimbo ye-mink, ezambiwa,